Aluminium dihydrogen phosphate imhando yemhando isina ruvara uye isina kunhuwa asi yakanyanya kunamira zvinwiwa, inonyungudika zvakasununguka mumvura uye inoomesa patembiricha yekamuri yakajairika.
Iyo mvura uye yakasimba ine simba rakasimba rekemikari inosunga, kupisa kwekushisa kwepamusoro, vibration kuramba, peelingresistance, uye tembiricha yakanyanya kuyerera kwemhepo.Uye ine yakanaka infrared absorption kugona uye insulation.
Inonyanya kushandiswa sebhainda uye kurapa mumiririri mukugadzirwa kwehi-temp refractorymaterials yemoto, pendi yekupfapfaidza,Ivhu remoto, kukanda uye indasitiri yekugadzira.
Isina ruvara, isinganhuhwi, yakanyanya viscous fluid kana chena poda.soluble mumvura.Inoshandiswa sebhainda refractory zvinhu, zvinonyanya kushandiswa muindasitiri yemagetsi, tembiricha yekupisa, kupisa kwekupisa kwekudzivirira uye kuvharwa kwemagetsi.Inoshandiswawo mu petroleum, makemikari, shipbuilding uye space technology.Inogona zvakare kushandiswa seyakaputira inorganic yakabatana neiyo organic coating.
Test zvinhu TECHNICAL PARAMETERS
Chitarisiko Colorless Liquid Upfu chena
PH Kukosha 1-3 2-4
►Colourless transparent viscous liquid kana chena poda, inonyungudika zviri nyore mumvura, uye iyo aqueous solution ine acidic.Yakasimba makemikari bonding, kurapa pane tembiricha yekamuri, yakakwirira tembiricha kuramba, yakasimba infrared absorption kugona uye yakanaka insulation.
►Inonyanya kushandiswa muindasitiri yemagetsi, tembiricha yekupisa, kupisa kupisa kwekudzivirira mavira uye magetsi ekudzivirira.Inoshandiswawo mu petroleum, makemikari, shipbuilding uye space technology.Inogona zvakare kushandiswa seyakaputira inorganic yakabatana neiyo organic coating.
Liquid kurongedza ndeye 30KG kana 300KG / ngoma;hupfu 25kg/bhegi.
Zvakapfuura: Condensed Aluminium Phosphate High Temperature Refractory Curing Agent
Zvinotevera: Aluminium Dihydrogen Phosphate, Mono Aluminium Phosphate